Ukuhamba kweWebhu: Uyilo, iPrototype kunye nokuQalwa kweDynamic, iiWebhusayithi eziPhendulayo | Martech Zone
Ukuhamba kweWebhu: Uyilo, iPrototype kunye nokuQalwa kweDynamic, iiWebhusayithi eziPhendulayo
NgeCawa, Agasti 14, 2016 Douglas Karr
Ngaba i-wireframing yinto yakudala? Ndiqala ukucinga ukuba iliza elitsha le-WYSIWYG lingena khowudi, tsala kwaye ulahle abahleli ngoku babetha imarike. Iinkqubo zolawulo lokuqulathiweyo ezithi zibonise umbono omnye ngasemva kunye nomnye ngaphambili-isiphelo zinokuphelelwa lixesha. Ewe… mhlawumbi ne-WordPress ngaphandle kokuba baqala ukufumana.
Ngaphezulu kwe-380,000 yabayili abayile ngaphezulu kweendawo ezingama-450,000 nge Ukuhamba kwewebhu. Isixhobo soyilo lwewebhu, inkqubo yolawulo lomxholo, kunye neqonga lokubamba zonke zibe nye. Oku kuthetha ukuba abaqulunqi bayayiphuhlisa ikhowudi ngaxeshanye- kwaye iziphumo zilungiselelwe ngokuzenzekelayo ubeko oluphendulayo.
Iimpawu zokuhamba kwewebhu zibandakanya:
UMyili ongenakhowudi - Ukuhamba kweWebhu kubhala ikhowudi ecocekileyo, yesemantic kuwe ukuze ukwazi ukugxila kuyilo. Qala ngetoti engenanto yolawulo loyilo olupheleleyo, okanye ukhethe itemplate ukuze uqalise ngokukhawuleza. Ngezicwangciso zabo zepremiyamu, unokukhuphela ngokulula i-HTML kunye ne-CSS ukuze uyisebenzise ngendlela othanda ngayo.
Uyilo loMoya -Yakha ngokulula ukubukeka kwesiko kwidesktop, ithebhulethi, kunye neselfowuni (imbonakalo-mhlaba kunye nomzobo). Lonke utshintsho olwenziwayo lwenza iicascades kwizixhobo ezincinci ngokuzenzekelayo. Thatha ulawulo lwendawo nganye yokuqhekeka, ukuze indawo yakho ijongeke njenge-pixel-ifanelekileyo kwizixhobo zonke.
Oopopayi kunye nokuNxibelelana -Zisa ukucofa, ukuhambisa phezulu, kunye nomthwalo wokunxibelelana ebomini ngaphandle kwekhowudi enezinto eziza kusebenza kakuhle kuso nasiphi na isixhobo nakwisiphi na isikhangeli sanamhlanje.
Izinto ezakhiweyo kwakhona -Ukuhamba, ukutyibilika, iithebhu, iifom kunye neebhokisi ezikhanyayo zakhiwe kwangaphambili, ziphendula ngokupheleleyo kwaye zibandakanyiwe ukubamba izikhokelo kunye nengxelo ngaphandle kwebhokisi.
I-ecommerce kunye nokudityaniswa -Ukudityaniswa kwemveliso kubandakanya uZapier kunye neMailchimp. Yakha indawo yakho yokugcina ngaphambili kwaye uphathe inqwelo yokuthenga kunye neentlawulo ngezixhobo zomntu wesithathu njengeShopify.
itemplates - Khetha ngaphezulu I-100 yeshishini, iipotifoliyo, kunye neetemplate zebhlog onokuyenza ngaphakathi kweWebhu.
Ukubamba kunye nee-Backups Sebenzisa idomeyini yesiko ene-backups ezenzekelayo kunye nezenziwa ngesandla, ukubeka esweni ukhuseleko, ukugcwala kunye noovimba beenkcukacha zemveliso, kunye nesantya esiphezulu sokulayisha iphepha.
tutorials Ukuhamba kweWebhu uncedo loncedo ubonelela ngezifundo ezininzi zokuba uqalise kunye nezifundo ezinzulu zokukunceda, kunye neforum kunye neendibano zocweyo.
Bhalisela iAkhawunti yokuHamba kweWebhu yasimahla
tags: CMSUmzekelo we-ecommercezokulimanoluphendulayodesign ezwayoprototype ephendulayoprototyping ephendulayothengaUkugqobhoza kwewebhu
Yintoni iChatbot? Kutheni iSicwangciso sakho seNtengiso sisiFuna
Lumanu: Fumana iimpembelelo kwaye ufumane umxholo onempembelelo